मुसी नाटकको समीक्षा | Purna Oli Free songs
Home / समीक्षा / मुसी नाटकको समीक्षा
Posted by: Purna Oli in समीक्षा March 5, 2020	0 287 Views
क) नाटक पूर्वकथन
पुसले दुर्गम पहाडको कुनाकन्दरा ठिहिर्‍याइरहेको बखत पहाडी जिल्ला रुकुमको तापक्रमको पारो भने एउटा समाचारले उकालोतिर लागिरहेको थियो । त्यो थियो मुसिकोट राज्य स्थापना सम्बन्धी कथानकमा आधारित रही साहित्यकार पूर्ण ओलीले लेखेको मुसी नाटक छिट्टै प्रदर्शित हुँदैछ भन्ने समाचार । उक्त मुसी नाटक राप्ती साहित्य परिषद् जिल्ला शाखा रुकुम पश्चिमको व्यवस्थापनमा तयार गरिँदै थियो । छायाङ्कनको जिम्मा पत्रकार अमरराज पुन र भरत चन्दले लिएका थिए ।
नाटकमा कर्णाली प्रलेस अध्यक्ष गिरिप्रसाद बुढा, राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा रुकुमका अध्यक्ष मनलाल ओली लगायत सुनिता शर्मा, प्रिती गौतम, एक्कबहादुर केसी, गङ्गा केसी, देवकुमारी ओली, मुकुन्दप्रसाद शर्मा, डम्बर खडका, हरिप्रसाद खनाल, प्रमोद शर्मा, धनबहादुर चन्द, हरिपवन प्रहर खडका, नरबहादुर ओली, कर्णबहादुर ओली आदि सम्पूर्णतः स्थानीय कलाकारहरुले खेलिरहेको खबर आइरहेको थियो । नाटक तयारी शुरु भएको दुई महिना पनि नबित्दै प्रदर्शनीमै आउन थालेको नाटकको बारेमा पत्रपत्रिकामा समेत खबरहरु प्रकाशित भएका थिए । आखिर के छ त त्यो नाटकमा ? नाटकलाई निम्नानुसारका बुँदाभित्र रही समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छः
ख) नाट्य प्रवृत्ति/विशेषताहरु :–
१) सामाजिक, पौराणिक र ऐतिहासिक विषयवस्तु ।
२) ऐतिहासिक विषयवस्तुलाई उठाएर अलिखित पौराणिक सत्यताको उजागर ।
५) मौलिक अभिनयको सशक्त प्रस्तुति ।
६) कथावस्तुलाई सशक्त बनाउन द्धन्दको प्रभावकारी प्रस्तुति ।
७) ठेट नेपाली शब्दहरुको मौलिक प्रयोग ।
ग) कथावस्तु/कथानक :–
भारदारी सभा बस्ने तयारी भएको छ, मुख्तियार भारदारहरु आ–आफ्नो आसनमा बसेका छन् सरकारको सवारी भएको छ भने सरकारको जय होस भन्ने आवाज घन्किएको छ । राजाको आदेश बमोजिम मुख्तियारले राज्यमा सबै राम्रो भएको जनता कसैले दु:ख नपाएको कुरा सुनाउँछन् । उक्त सभामा बाँफिकोट राज्य, रुकुमकोट राज्य, मठगाउँ आदिको चर्चा भएको छ भने दक्षिण क्षेत्रबाट गोरखे फौज पस्न सक्ने संकेत गरिएको छ । जुन मुरु, खारा, जिवाङ्ग हो । पश्चिम क्षेत्र भनेको चौरजहारी हो, नदी र खोलाले बनाएका खेतीयोग्य जमिन र फाँटहरु त्यहाँ भएको र बैरी आएमा भेरी नदीमा खसाउने योजना त्यस क्षेत्रको भारदारले राजालाई सुनाएको छ । जनताहरुले कुत उठाइरहेको, कुत उठाउन कर्मचारीहरु खटाइएको बोली विस्तार गरिएको छ भने सरकारका आदेश एक गाउँको कटुवालले बताइरहेको न्याय छिन्ने व्यवस्था मिलाएको, अपराधीहरुलाई प्राणदण्ड दिने व्यवस्था र कैदखाना बनाउने व्यवस्था मिलाएको कुरा भारदारहरुले राजालाई सुनाउँछन् ।
सभा सकिएपछि राजा र रानी विच कुराकानी हुन्छ रानीले राजालाई मुख्तियार बदमास भएको, भारदारहरु कुकार्यमा संलग्न भएको कुतको आधा अंश आफैले लिने गरेको लोभीपापी भएको प्रसँगलाई सुनाउँदा राजालाई रानीको कुरालाई विश्वास गर्दैनन् र रानी लाई धेरै शँका नगर्ने आग्रह गर्दछन् ।
मुसी एउटा पाखोमा घाँस काट्दै ठाडीभाकाका गीतहरु गाइरहेको दृश्य देखिन्छ । त्यतिनै बेला एकजनायुवक बेहोश भएर लडेको मुसीले देख्छ । युवकको नाडी, छातीको चाल, छाम्छे उठाउन खोज्दा युवकले ऐया ऐयाको आवज उठाउँछ वाक वाक गर्छ उसलाई महामारीले सताएको मुसीलाई आभास हुन्छ । मुसीले महामारीले सताएको बिरामीलाई आफ्नो घरमा लग्दा उसका बुवा आमा आत्तिन्छन् । मुसीले यिनको ज्यानजाला जस्तो भइसक्यो झाडापखालाको औषधी के हुन्छ भनेर बुवाआमालाई सोधछिन् । दही चामल र जमराको पानीले पनि झाडापखाला रोकिने कुरा बताइएपछि त्यसपछि मुसी आफन्तकहाँ गएर टीका लगाइ माग्छे र घरमा आएर पखालेर त्यसको झोल राजकुमारलाई खुवाउँछे । बुवाले काँइयोले झार्दै बेसारपानी फुकेर खुवाउँछन्, साउने सक्रान्ती परेकोले दही टीका आफन्तलाई लगाउन लगाएर घरमा आई टीका पखाली राजकुमारलाई खुवाउँदा राजकुमार व्युझिन्छन् ।
उता चौखाबाङी दरबारमा भारदारी सभा बसिरहेको दृश्य देखिन्छ । राजाले भारदारहरुलाई राजकुमार खोइ ? भनेर प्रश्न गर्छन् । उनले आफूलाई महामारीले छोएर बिरामी पर्दा गाउँले केटीले बचाएको र उसका अरु धेरै गुणहरु आफूले अवलोकन गरेकोले भारदारमा त्यही केटीलाई राख्नुपर्ने प्रस्ताव राख्छन् ।
भारदारहरुले भने त्यो केटीको बाबु यो राज्यका विरुद्धमा छ । कानुनको बर्खिलाप गर्छ । कुत तिर्न पनि आनाकानी गर्छ । उसलाई त्यो सब सिकाउने त्यसकै छोरी भएकोले त्यस केटीलाई दरबारमा भित्र्याउन नहुने जिकिर गर्छन् । तर राजालाई भने त्यो केटी हेर्ने उत्सुकता बढेकोले केटीलाई गाउँमा खोजेर ल्याउने आफ्नो आठपहरियालाई आदेश दिन्छन् ।
आठपहरियाले मुसीलाई दरबारमा ल्याइपुर्‍याएपछि राजाले उसको परिचयको साथ गाउँको हालखबर सोध्छन् । मुसीले आफ्नो परिचय दिँदै भन्छे राज्यमा बेथिती, अन्याय, अनिकाल, महामारीले ग्रस्त छ । गोरर्खे फौजले यसलाई आफ्नो राज्यमा मिलाउन चाहन्छ ।
मुसीले गाउँको वर्णन गरिरहँदा मुख्तियारले ती कुरामा कुनै सत्यता नभएको बताउँदै यो त हाम्रो राज्यको विद्रोही हो भन्दै गाउँमा शान्ति सुव्यवस्था कायम भइरहेको जिकिर गर्छन् । गोरखे फौज आइरहाले पनि लडेर जित्न गाह्रो भएकोले मितेरी लगाएर राज्य जोगाउन सकिने उपाय राजासमक्ष पेश गर्दछन् ।
राजकुमारका हराएका आठपहरियाहरु दरबारमा आइपुग्छन् र राजालाई चुक्ली लगाउँछन् कि गोर्खे फौजले मुसीका बाबु साइँला भण्डारीलाई पनि हातमा लिइसके र गाउँलेहरु मिलेर राज्यविरुद्ध हर्कत गरिरहेका छन् ।
उता मुसीले बताएका कुरामा राजालाई द्विविधा भइरहेको हुन्छ । कतै भारदारहरुले गलत बोलिरहेका त छैनन् । अतः मुसीलाई हरबखत आफूसँगै राखेर गाउँका विभिन्न कुराहरु बारेमा जानकारी लिन्छन् । मुसीले पनि जानेबुझेसम्म सबै कुराहरु बताउँदै जान्छे ।
राजाका अन्य सुसारेहरुले भने मुसीलाई मुख्तियार भाइ भारदारसँग मुख नलाग्न, सरकारलाई नचाहिने कुरा नर्गन आग्रह गर्छन् । मुसीले राजालाई गुमराहमा राख्ने होइन कि सत्यतथ्य बताउनुपर्दछ भन्दै ढाँटेर दरबारमा बस्न नसक्ने कुरा बताउँछे ।
भारदारहरुले आफू विरुद्ध षडयन्त्र रचिरहेको कुरामा ऊ पनि सशंकित भैरहेकी हुन्छे । उता भारदारहरुको मात्र बैठक बस्तछ र कि त मुसीले दरबारीया प्रचलनअनुसार बस्नुपर्ने नभए सिद्याइदिने निर्णय गरेर एकजना आठपहरियालाई बोलाउन पठाउँछन् । आठपहरियाले मुसीलाई बोलाउन आएको सुइँको पाएर ऊ दरबारबाट भाग्दछे । मुसीलाई भारदारहरुले लखेट्न थाल्दा कुरै नबुझी गाउँलेहरुले समेत लखेट्न थाल्दछन् ।
गोरखा फौजको आक्रमण विरुद्धको लडाइको तयारीलाई चौखावाङ्गी राजा विरुद्धको तयारी भइरहेको खबर दरबारमा पुग्छ । राज्य कब्जा गर्न मुसीले सबै मान्छेहरुलाई कब्जामा लिएको खबर आठपहरियाहरुले राजालाई सुनाउँछन् । राजकुमारले आठपहरिया र भारदारहरुले भनेको कुरा गलत हो मुसीले गोर्खे फौजको विरुद्ध तयार रहन जनताहरुलाई भनिरहेकी छे भन्दै मुसीको बचाउ गर्न खोज्छन् । भारदारले गोर्खे फौज चौखावाङ्गी राज्यभित्र पस्ने कुनै सम्भावना नभएको र यो मुसीको षडयन्त्र मात्र भएको बताउँछन् । मुसी भागेको र भारदारले मुसीले नै राज्य विद्रोह मच्चाइरहेको बताएपछि राजालाई पनि सहीनसक्नु हुन्छ र मुसीलाई पक्रेर दरवारमा आदेश दिन्छन् । राजकुमारले निर्दोष मुसीमाथि नै षडयन्त्र हुने कुरा चाल पाएर भारदारीसभाबाट बाहिरिन्छन् ।
चौखाबाङी राज्यको एउटा गाउँमा गोर्खे फौजको आक्रमण हुन्छ । मुसी लगायत गाउँका अरुमान्छे्हरु फौजको विरुद्ध उत्रन्छन् । कसैलाई खौलामा, कसैलाई खोलामा बगाउने, कसैलाई गुलेलीले हान्ने, सोलावाङ्गमा सोलाहरु पटकाइन्छ, गोर्खे फौजको भागाभाग हुन्छ । त्यहाँबाट उनीहरु लखेटिन्छन् ।
त्यतिनै बेला राकुमार गाउँमा पस्छन्, धेरै केटीहरुलाई मुसीकै रुप धारण गर्न लगाउँछन् । प्रत्येक केटीहरुसँग एक एक वटा बंदेल साथमा राख्न भन्दछन् । त्यति नै बेला राजाका धुपौरेहरु आएर सम्भावित मुसीहरुलाई लछारपछार पार्दछन् भने केही लाई मार्दछन् पनि ।
गोर्खे फौजको एक टुकडीले दरबारमाथिनै आक्रमण गर्छ । केही भारदार र राजारानीलाई डोरीले बाँध्छन् । चौखावाङ्गी राजा सजिलै कब्जामा परेकोमा गोर्खे फौजका मान्छेहरु खुसी हुन्छन् । मुसीले अवरोध नगरेको भए र राजालाई गाउँलेहरुबाट नअलग्ग्याएको भए उहिल्यै यो राज्य कब्जामा लिन सकिन्थ्यो भन्दै आपसमा कुरा गर्दछन् । चौखाबाङी राजाका आठपहरियाहरुलाई बोलाएर मुसीकोटे जनता र राजाको सम्बन्ध टुटाउने भूमिका खेलेकोमा तिमीहरुलाई धन्यवाद भन्दछन् । यो देखेर राजालाई असहय हुन्छ ।
त्यतिबेला गोरखे फौजका काजीले राजालाई सम्झाउँदै पृथ्वीनारायण शाहको विशाल नेपालको अभियान साकार पार्ने क्रममा यहाँ आइपुगेको र तनहुँ कुप्रिकोटे राजा जनताहरुको अगाध प्रेम तथा मुसी जस्ता साहसी र विवेकी योद्धाको विशाल राज्य निर्माणमा राज्यलाई खाँचो भएको बताउँदै मुसीसँग क्षमा माग्नको लागि बन्धनमुक्त गरिदिन्छन् ।
गाउँगाउँमा भने मुसीलाई मारेर पुरस्कार पाउन जासुसहरु दौडिरहेका छन् । मुसी गाउँलेहरु सहित ती जासुसहरुबाट भाग्दै र बच्दै बोरागाउँमाथिको डाँडोको निर्जन स्थलको आश्रय लिन पुग्छे ।
गाउँलेहरुले साउने सक्रान्तीको दिन परेकोले खुशियालीसाथ लुतोपुतो फाल्ने उत्सवमा सरिक हुन्छन् । राजा पनि त्यही डाँडो नजिक आइपुग्छन् र आफ्ना प्रजाहरु देखे खुशी हुन्छन् । गाउँलेहरुले अगाडि नबढ्न चेतावनी दिएपछि राजाले मुसीलाई भेटेर क्षमा माग्न चाहेको कुरा बताउछन् ।
राजाले गाउँलेहरुसँग धेरै अनुनय विनय गरेपछि मुसीसँग भेट्न दिइन्छ । राजाले चौखाबाङ राज्य गोरखा फौजको कब्जामा परेको कुरा मुसीलाई बताएपछि मुसीलाई राज्य नै हराएको चिन्ताले असह्य हुन्छ र झण्डै मुर्छा पर्छे । यो अवस्था सिर्जना हुनुमा राजा र राज्यप्रणालीको अज्ञानता, अकर्मण्यता भएको भन्दै उसले अलापविलाप गर्छे । राजाले मुसीको राष्ट्रभक्ति चिन्न नसकेकोमा खेद प्रकट गर्दै आफ्नो भूल स्वीकार गर्छन् । जनताहरुले भने हरुवा राजासँग पनि शर्त तेर्स्याउन छोड्दैनन् । जनताले आफूलाई अझै पनि राजाकै मान्यता दिइरहेको खुशीको आवेगमा उनीहरुले राज्यको नाम मुसीकै नामबाट राख्नुपर्छ भनी माग तेर्स्याउँदा राजाले घोषणा गरिदिन्छन् कि “यो राज्य अब राष्ट्रभक्त, कुशल, योद्धा, प्रजाहरुको उद्धारकर्ता, मानवरक्षक मुसीकै नामबाट प्रख्यात हुनेछ । यो राज्य अब मुसीकोट राज्य हुने भयो ।“ त्यसपछि गाउँलेहरु हाम्रो र राम्रो मुसीकोट पाइयो भनेर नारा लगाउँदै खुशियाली मनाउँछन् ।
उता चौखाबाङी राज्य गोरखा फौजको कब्जामा परिसकेको अवस्थामा कुन हैसियतमा एक हरुवा राजाले त्यही राज्यलाई मुसीकोट राज्य घोषणा गर्न सक्छन् ? अब राजा राजकुमार र मुसीको हैसियत के रहन्छ ? भन्ने कुरा रहस्य र द्विविधाको भुमरीमा फसाएर नाटककारले कथा अकस्मात समाप्त गरिदिन्छन् । व्यक्तिगत रुपमा गरिएको एक जिज्ञासामा उनी भन्छन् यो जिज्ञासा निवारणको लागि अब मुसी-दुई नाटक पर्खनुहोस् ।
घ) पात्र/चरित्र :–
१) नाटकको केन्द्रिय पात्र, नायिका, लेखकको मुखपात्र, दोस्रो दृश्यदेखि अन्तिम दृश्य सम्म नाटकको भूमिकामा मुख्य भूमिकामा रहेकी पात्र ।
२) गाउँले तर एक सशक्त नारी पात्र ।
७) पल्लाघरे साइँला अर्थात् गाउँको प्रगतिशील पात्रकी छोरी भनेर दरवारमा मुसीलाई चिनाएकोे पात्र ।
२२) आफ्नोराज्य गोर्खे फौजले लग्यो भनेर राजाले सुनाउँदा, राज्यसँगै हामीलाई समेत मा¥यौं भनेर आक्रोश व्यक्त गर्ने पात्र ।
२५) मुसीएक राष्ट्रभक्त, कुशल योद्धा प्रजाहरुको उद्धारकर्ता भएको पात्र ।
२६) मुसीको नामबाट नै मुसीकोट हुन सफल हुनमा मुसीको योगदान नै भएको चर्चा ।
ख) राजा :–
१) चौखाबाङी राज्यका राजाको भूमिकामा भए पनि नाटकको सहायक पात्र ।
२) दरबारिया नीति र नियमलाई प्रयोग गरी राजकाज चलाउने पात्र ।
१३) मुसीकै नामबाट मुसीकोट दरबारको नामकरण गर्न स्वीकृति दिने पात्र ।
१) नाटककी सहायक पात्र ।
२) रानीले नै मुख्तियार, आठपहरिया र भारदारहरु खराबै भएको बताउने पात्र ।
१) मुख्य पात्र ओगट्न नसकेको सहायक पात्र ।
१) सहायक पात्र तर प्रमुख खलनायक ।
४) राज्य संयत्रको कथित इतिवृतको वकालत गर्ने पात्र ।
९) सबैतिर अमनचयन र शान्ति छ भनेर भन्ने पात्र ।
१०) मुसी राज्यको विद्रोही हो भनेर भ्रमको खेती गर्ने पात्र ।
च) मूलभाव/उद्देश्य/जीवनदृष्टि :–
६) मुख्तियारको राज्यसञ्चालन प्रक्रिया विधि, जनअपेक्षा अनुकुल नभएकै कारण दरबारमा ठूला ठूला षडयन्त्रहरु हुँदा रहेछन् भन्नेवास्तविकताको चित्रण ।
७) द्धन्दैद्धन्दले भरिपूर्ण नाटक (दरबार र समाजविच द्धन्द, चौखावाङ्गी राजा र गोर्खेफौज बीच द्धन्द, दरबार गाउँलेहरुविच द्धन्द, राजा र मुसीविच द्धन्द, राजा र रानीविच द्धन्द, राजा र राजकुमारविच द्धन्द, मुसी र मुसीका साथीहरु विच द्धन्द, राज्य र राज्यका वीच द्धन्द, न्याय र अन्यायविचको द्धन्द, सत्य र असत्यविच द्धन्द) ।
१३) दरबारिया संयन्त्रमा महिलाहरुको बोलवाला नहुनुनै दरबारियाहरुको पतन भएको प्रमाण । (मुसीलाई भारदारमा नराखेर सुसारेको काममा लगाउनु) ।
१४) शंकाले लंका जलाउँछ भन्ने तथ्य आठपहरियाहरुले राजालाई महामारी लागेको बेला औषधी खोज्न गएको, फर्कदा राजकुमार नभेटिएको, उनीहरुले गाउँ घुम्दा गोर्खे फौजका गुप्तचरहरु डुलेकोखबर राजालाई भन्दा समेत राजाले नपत्याएको उल्टै मुसीको जस्तो शंका गर्ने नामर्दहरु भनेर हप्काएको, कालान्तरमा उक्त कुरा पुष्टि भएको । राज्यजलेको गुमेको, पतन भएको विचार अभियुक्त भएको छ ।
१७) इमान्दार र राष्ट्रभक्तहरुको कुरा नसुन्दा राज्यनै हराउँछ । (मुसीको कुरालाई/सूचनालाई दृढतापूर्वक नलिनुलाई कालीपानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटर भारतले नक्सा बनाएजस्तै हो भन्ने सन्देश दिनु) ।
१८) विम्ब र प्रतीकहरुले भरिपूर्ण नाटक । (बच्चाबच्चीहरुलाई गुलेली चलाउन सिकाउनु, दलाखेतमा खोलाहरुरु तयार हुनु, न्यायपोखरीमा पानी भरेर सर्पहरु राख्नु, ढुङगा लडाएर सिदयाउनु, गौडा गौडामा खुकुरी देखाउनु, सोलावाङमा बाँसका सोलाहरु गाडीनु, बंदेलसंग मुसी, कालाराकस, राज्य हराउनु, राज्य सँग सँगै हामी मारिनु, राज्यप्रणालीको अदुरदर्शिता, अकर्मण्यता, मेरो जीवननै खोसिएछ) ।
छ) परिवेश :–
१५) सत्यतामा आधारित परिवेशले नाटक कालजयी बन्नमा प्रेरित गरेको आभासयुक्त परिवेश/वातावरण ।
ज) भाषाशैली :–
४) स्थानीयमौलिक शब्दहरुको चयनले नाटकको गरीमामा विस्तार हुनु ।
६) सरखार, तेरोतिर, गारो, नियतिसफा, हाम्लाई,छडक्या, भन्चन्, क्यार्न, मान्चौं, रम्चाउ, गैजान्चन, नाक्चो, ह्याँ, कालकष्ट, च्यान्नौ, उनापाई, लखेनी, जोवन, लाउँचे, उँदै, चवानीय, ढलक्यो, विलाउनै, बाउ, कौना, यै, गइयो, कइल, झलको, तापु, गारको, लेखको, आइसेल, साँइलोजी, लुतो पुतो, काइनेकुइने, खटिरामटिरा, कालाराकसजस्ता स्थानीय मौलिक भाषिक शब्दहरुको चयनले नाटकको मौलिकता प्रष्ट हुनु ।
ज) नाटककारको परिचय :–
नाटककार पूर्ण ओलीको जन्म वि.सं. २०२४ साल भाद्र २९ गते मुसीकोट नगरपालिका वडा नं. ४ सोलावाङ रुकुम (पश्चिम) मा भएको हो । उनको बुवाको नाम यज्ञबहादुर ओली र आमाको नाम योगमाया ओली हो । जीवनसाथी देवकुमारी ओलीको सहयोगले ओलीले साहित्य लेखनलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । हाल निजामती कर्मचारीको पदमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
मान्छेको माया (गीतिनाटक) जितौरी (कथासंग्रह: प्रकाशोन्मुख।) दिन फिर्छन त ? (खण्डकाव्य), मुसी (ऐतिहासिक नाटक), थुप्रै फुटकर कविता, कथा र लेखहरु प्रकाशित गरेका लेखक ओली हाल मुसी नाटकको अभिनयमा केन्द्रित रहेको देखिन्छन् ।
पूर्ण ओलीद्धारा निर्देशित, पूर्णाङकी मुसीको, पूर्ण सफलता सहित, पूर्ण शुभकामना एवम् नमन गर्दछु ।
Previous: मुसी नाटक (ट्रेलर)
Next: छोरालाई शुभकामना चिठ्ठी
भूइँया र भूपेन्द्र
भूपिन र सुफ्लाको हवाइजहाज